जात के हो ? थर के हो ? नेपालमा कसरी रहन गयो ? – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७८ जेष्ठ २५, मंगलवार ०९:११
जाति भनेको यहि हो । यो ४ बाहेक अरु कुनै जाति हुन्दैन । शास्त्र (धर्म ग्रन्थहरु) अनुसार मानवको कुनै जाति छैन । सबै मानव एउटै जाति ‘मानव जाति’का हुन् । आत्मालाई शरिर धारण गर्नको लागि यहि ४ वटा माध्यम चाहिन्छ । आत्मा त्यो जीव हो, जुन अमर छ । आत्मा न महिला हुन्छ, न पुरुष, न नपुंसक । आत्माले जुन शरिर धारण गर्छ त्यहि अनुसार आफ्नो पहिचान ग्रहण गर्छ । आत्मा यदि पुरुषको शरिर पायो भने त्यो पुरुष हुन्छ । यदि स्त्रीको शरिरमा गयो भने त्यो स्त्री हुन्छ । यदि नपुंसकको शरिरमा गयो भने त्यो नपुंसक हुन्छ । त्यस्तै आत्मा यदि हात्ती, कुकुर, रुख, बिरुवा, किरा, कमिलाको शरिर धारण गर्छ भने त्यो त्यहि पहिचानको साथमा जन्म लिन्छ । यहि सबैकाे जातकाे कारण हुन्छ । मानवलाई इश्वोरले सबै भन्दा धेरै महत्व दिएको छ । र, मानवलाई इश्वोरले एउटा यस्तो महत्व पूर्ण कुरा दिएको छ जसले गर्दा मानव सबै शरिर धारी जीवहरुमा सबै भन्दा उत्तम छ । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ‘बुद्धि’ । हाम्रो यहि बुद्धिले हामीलाई सबै जीवहरु भन्दा भिन्न र महत्व पूर्ण बनाउन छ । हामीमा सोच्ने, सम्झिने, विचार गर्ने र त्यो विचार सहि हो कि गलत त्यसलाई तथ्य पूर्ण तरिकाले बुझी ब्यबहारमा धारण गरेर उत्तम उत्तम कार्यहरु गर्ने क्षमतामात्र हामी मानवहरुमा छ । त्यसैले सबै मानवलाई “वेद”ले भन्छ:
नेपालका आर्य–खस, मधेसी र नेवारभित्रका दलितहरूको थर निर्माणको प्रक्रिया र विद्यमान थरहरू पनि अन्य सबै जाति समुदायको जस्तै नै हो। यी तिनै जातिसमुदायभित्रका दलितको थुप्रै थरहरू र ती जाति समुदायभित्रका गैरदलितको थुप्रै थरहरू मिल्छन होइन बरु एउटै हुन्। त्यसैगरी प्रत्येक जातजाति समुदायमा मात्र पाइने थर भए जस्तै दलितभित्रका विभिन्न जातहरूमा मात्र पाइने थर पनि छन्। दलितहरूका थर र गैरदलितका थर मिल्नुका तीन वटा कारण छन्। एक, उद्गम स्थल एउटै भएकोले जस्तै :- पौडी क्षेत्रबाट हिडेका हुनाले ब्राह्मण पनि पौडेल र दलित पनि पौडेल भनी चिनियो। दुई, पद्वीसँग मिल्न गएकाले। जस्तै:- मण्डल, मिझार जस्ता पद दलित, जनजाति र मधेसका वैश्य अन्तरगतका कतिपय जातको मुखियालाई दिइन्थ्यो। त्यही पद्वी दलित, गैरदलितले थर बनाउँदा मिल्न गयो। र तीन, गैरदलित पुरुषलाई जात झारेर सजाय दिँदा थर चाँहि कथित माथिल्लो जातकै बाँकी रहन पुग्यो। मुन्धुम स्टार